"संसदमा विजनेश छैन, मन्त्रीहरु रिबन काटेर हैरान छ" : प्रमुख सचेतक कार्की - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
“संसदमा विजनेश छैन, मन्त्रीहरु रिबन काटेर हैरान छ” : प्रमुख सचेतक कार्की
Posted by Milap Subedi | २१ चैत्र २०७४, बुधबार १२:२३ |
कर्मचारीको असहयोग र केन्द्रकृत सोच भएका नेताले गर्दा संघीयता असफल हुने खतरा बढेको प्रदेश १ का प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताएका छन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसले प्रदेश १ मा कसरी सहयोग गर्छ, अथवा रचनात्मक भूमिका कसरी निर्वाह गर्छ भन्ने सवालमा रहेर राज ढुंगानाले प्रमुख सचेतक कार्कीसँग गरेको कुराकानी–
० प्रदेशसभाको सांसदको अनुभव कस्तो रह्यो ?
– प्रदेशसभामा हामी उत्साही छौं, हिजो अरुले बनाइदिएको नियम कानुन अथवा अरुले बनाइदिएको विधि विधानमा चल्नुपथ्र्यो । अहिले हामी आफै विधि विधान बनाएर चल्नुपर्ने भएकोले हामी अहिले उत्साहित छौं ।
० अहिले पक्ष प्रतिपक्ष भन्ने बेला हो ?
– होइन, अहिले हामी सबै सांसद हौं, प्रदेशसभाका सदस्यले एकअर्काको पार्टीगत रुपमा नहेरी प्रदेश अनुकूलको नियम कानुन र संरचना बनाउने कुरामा हामी एक भएर जानुपर्छ । र, अहिलेसम्म त्यो देखिएको पनि छ ।
० अब प्रदेशका जनताले केन्द्रको मुख ताक्नु पर्दैन ?
– जनताले परिणाम तुरुन्तै खोज्छन् । तर हामीले संरचना नै नबनी दिनसक्ने अवस्था छैन । अहिले सरकारमा बस्ने साथीहरुले सय दिने कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ, त्यो के आधारमा आयो रु यस्ता कुरा खोज्न जरुरी छ । किनभने हामीसँग नियम कानुन छैन, नियम कानुन ऐन बिना कुनै कार्यक्रम गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं ।
० मुख्यमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयन अन्योल भयो भन्नुभएछ नि ?
– यसको अर्थ मुख्यमन्त्रीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो छ । केन्द्रमा बस्ने प्रशासकहरु संघीयता धारासायी बनाउन लागेका छन् । सरुवा भएर काठमाडौं पुगेका कर्मचारीले त्यही घर बनाएका छन् । उनीहरु हिजोकै जस्तो मोजमस्ती खोज्छन् । देशभरिका संरचनाको पैसा तानेर उनीहरुले काठमाडौंमा घर बनाए । तिनीहरुको सोच केन्द्रिकृत छ । अरुतिर बजेट वा अधिकार गयो भने हामी फुक्का हुन्छौं भन्ने हिसाबले केन्द्रिकृत सोचका आधारमा प्रदेशलाई फिक्का बनाउन खोजिएको छ ।
० नेतामा चाहिँ केन्द्रिकृत सोच छैन ?
– छ, एकदमै छ, त्यही सोचका कारण हामी पछि प¥यौं । काठमाडौं पुग्दा घर मात्रै देख्न पाइन्छ । काठमाडौंमा जति घर बनेका छन् ति कर्णाली, तराई, हिमाल जोड्न बाटाघाटा, गरिब जनताको लुगा फाटाका लागि आएको पैसाले बनेको देख्छु । विराटनगरमा बस्ने एउटा खरदारले आफ्ना सन्तान बोर्डिङ स्कुलमा पढाउन उसलाई धौ धौ पर्छ । तर, काठमाडौंमा बस्ने खरदारले मासिक ४२ हजार रुपैयाँ तिरेर बच्चा पढाइरहेका छन् । त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ रु त्यो पैसा प्रदेशको खोलानालाको हो । नेता र कर्मचारीको केन्द्रिकृत सोचमा जे भइरहेको छ, त्यसले संघीयता असफल बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।
० केन्द्रिकृत मानसिकता बद्ल्ने कानुन बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
– यो कानुन आवश्यक छ, कानुन निर्माण सरकारले संसदलाई दिने विजनेस हो । हामीले छिटोभन्दा छिटो विजनेस चाहियो भनिरहेका छौं । प्रदेशलाई स्वयत्त बनाएर लैजानुपर्छ । अनर्थ लाग्ने स्वयत्त होइन । अरु प्रदेशभन्दा १ नम्बर प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजानुपर्छ ।
० प्रदेश सरकारले संसदलाई विजनेश दिन सकेको छैन ?
– हाम्रो आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाहेक अरु मन्त्रालयले हामीलाई विजनेश दिन सकेको छैन । उहाँहरु अलमलिनु भएको छ । विधान कानुन केही छैन, प्रदेशका मन्त्रीहरु रिबन काटेर हैरान छ ।
Previousप्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनले दिएको सङ्केत
Nextलगानी बोर्डले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना प्रवर्धक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने
एमालकोे मेची महाकाली यात्राको विस्तृत कार्यक्रम सार्वजनिक ! (कहाँ-कहाँ हुँदैछ जनसभा ? कार्यक्रम सहित)
१२ फाल्गुन २०७३, बिहीबार १६:०४
आर्थिक समृद्धिको रोडम्याप सहित नयाँ शक्तिको घोषणापत्र सार्वजनिक !
१८ बैशाख २०७४, सोमबार १६:२७
श्रम मन्त्री मन्सुरको आरोप : नेकपा एमाले र मधेश केन्द्रित दल दुवै बिखण्डनवादी
१८ श्रावण २०७४, बुधबार १४:२०
सर्लाहीबाहेक सबै जिल्लाको समानुपातिक मतगणना सम्पन्न, कसले कति मत पाए ?
१ पुष २०७४, शनिबार १९:३०